Kameleoon: Injini yeAI Kufanotaura Zvichida Shanduko Yevashanyi Martech Zone
Kameleoon: Injini yeAI Kufananidzira Ungango Yekutendeuka Yevashanyi
China, Gumiguru 1, 2020 China, Gumiguru 1, 2020 Douglas Karr
Kameleoon ipuratifomu imwe chete ye chiyero chekushandura optimization (CRO) kubva kuA / B kuyedzwa uye kukwidziridzwa kune chaiyo-nguva yekuita munhu uchishandisa njere dzekunyepera Kameleoon's muchina-kudzidza algorithms kuverenga iyo kutendeuka mukana yemushanyi wega wega (anozivikanwa kana asingazivikanwe, mutengi kana tarisiro) mune chaiyo-nguva, achifungidzira kutenga kwavo kana kuita chinangwa.
Kameleoon Kuedza uye Yemunhu Platform
Kameleoon iwebhu ine simba uye yakazara stack ekisiperimendi uye Personalization chikuva chevaridzi vezvigadzirwa zvemadhijitari uye vashambadzi vanoda kuwedzera shanduko uye kutyaira kwakakura online mari kukura. Iine maficha anosanganisira kuyedza kweA / B, chidimbu chevashandisi, hunhu hwekutarisa uye data-rechokwadi-nguva, Kameleoon inobatsira mabhizinesi kuwedzera shanduko dzepamhepo uye kuwedzera mari.
Forrester yakaitiswa zvakadzama kubvunzana nevatengi veKameleoon vatengi mumaindasitiri anosanganisira e-commerce, mafambiro, mota uye zvekutengesa nezve zvavakaratidzira mhedzisiro.
Kameleoon Mabhenefiti akaonekwa pamusoro pemakore matatu emakore anosanganisira:
Kusvika pa 15% kuvandudzika mukutendeuka kwemitengo nekugadzirisa ruzivo rwevashanyi vewebhu uye nekugadzirisa kusangana mukuvandudza shanduko. Izvi zvinomiririra matatu-makore njodzi-yakagadziridzwa bhenefiti ye $ 5,056,364 muhuwandu hwazvino.
Kusvika pa 30% inowedzera mukutengesa-kutengesa kutengesa, neKameleoon's behaviour uye mamiriro-akavakirwa ongororo inogonesa mabhenji kuwedzera huwandu hweanobudirira kutengesa-mishandirapamwe. Izvi zvinomiririra kuwedzera-makore matatu njodzi-yakagadziriswa kubatsirwa kwe $ 577,728.
49% kudzikisira mushandirapamwe yekumisikidza. Kameleoon's AI-powered personalization kugona uye kusimba kugoverwa kwewebhu traffic kune ekushandura masimba emabhakiti zvakanyanya kudzikisira nguva inodiwa yekumisa mishandirapamwe uye dhizaini zviitiko zvewebhu nekudyidzana, nepo ichiwedzera kuzvitongesa kwevatengesi neyakajeka uye mushandisi-inoshamwaridzika nzvimbo. Izvi zvinomiririra bhenefiti ye $ 157,898 muukoshi hwazvino pamusoro pemakore matatu.
Uye zvakare, vatengi vakaona zvinotevera zvisina kukodzera mabhenefiti:
Kuvandudzwa kweVatengi Chiitiko (CX) - Nekugonesa kuendesa kweyakagadzirirwa zvemukati uye mameseji, Kameleoon anotendera masangano kupa akakodzera, akasarudzika ruzivo.
Kuwedzera Kwevashandi Chiitiko (EX) - Vashandisi vanonzwa kuwedzerwa simba sezvo ivo vachigona kuita shanduko dzakareruka uye kugadzirisa mune zvemaminetsi, nekudaro vanonzwa kuwedzera kugadzikana uye kugadzikana - uye kupiwa simba mune ravo basa.
Kununura yakagadziriswa, yega yedhijitari chiitiko ikozvino ndiyo yepakati pekubudirira kwebhizinesi - nedenda richikurudzira kudiwa kwemabrands kutarisisa pakuedza uye kuita kwako. Ichi chidzidzo uye ongororo yaForrester inoratidza kuti simba nekureruka kwekushandisa kwaKameleoon kunotsigira sei vatengi mumabhizimusi munyika iri kuramba ichikwikwidza, yedhijitari-yekutanga, kuendesa kukurumidza ROI uye kwakakosha mari kwenguva refu. "
Jean-René Boidron, CEO, Kameleoon
Asati ashandisa Kameleoon, masangano evatengi anga asina kana hunyanzvi hwekuita kana zvachose kana aishandisa mapuratifomu ekuyedza A / B aive asina injini dzekufungidzira uye kurovera. Ivo vakanzwa kuti vaishaya mukana wekusimudzira shanduko mitengo nekugonesa yakanangwa webhu ruzivo dhizaini.
Anopfuura makambani makuru mazana mana nemakumi mana anotsamira paKameleoon, ichiita iro repamusoro SaaS chikuva cheAI-inotungamirwa munhu muEurope. Izvi zvinosanganisira vatungamiriri muecommerce nekutengesa (Lidl, Cdiscount, Papier), midhiya (Mumsnet, L'Equipe, Axel Springer), kufamba (SNCF, Campanile, Accor), mota (Toyota, Renault, Kia), mabasa emari (Axa, AG450R, Chikwereti Agricole) uye hutano (Providence). Kameleoon arikubudirira pagore matatu huwandu hwekukura mune vese vatengi nemari.
Kumbira Kamemooon Demo
Tags: ab testaiai-inotyairwa munhuchidimbu chinotungamirwa neaiAnalyticschakagadzirwa njerekutendeuka mukanacrokameleoonkcsPersonalizationchimvari
MetaCX: Gadzirisa Kwevatengi Lifecycle Kubatana NeMhedzisiro-Yakavakirwa Kutengesa
Bizzabo: Simba Wako Mukati-Munhu uye Virtual Zviitiko pane Imwe Platform